Wasiirada Cusub Oo Yeeshay Kulankii Koowaad & 5 Maalmood Oo Xilalka Lagula Kala Wareegayo (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Golaha wasiirada cusub ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku yeeshay kulankoodi ugu horreeyey, iyadoo shalay xilka loo dharriyey kadib markii baarlamaanku ansixiyey.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta shir guddoomiyay kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan xubnaha golaha Wasiirada ee shalay la dhaariyay, waxaana kulankan diirada lagu saaray qaabka ugu haboon ee ay golaha Wasiiradu ula wareegi lahaayeen Xafiisyada Wasaaraddahooda.
Kulankan ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay R’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, isaga oo xusay in kulankan uu yahay kulankii ugu horeeyey ee uu la yeesho xubnaha Golaha Wasiirada ee cusub, isla markaana ay kala warqaateen.
“Waxaa Alle mahadii ah inaan maanta yeelanay kulankii ugu horeeyey kadib markii shalay la dhaariyay, waxaana ka wadahadalnay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeysay sidii ay Wasiiradu ula wareegi lahaayeen xafiisyada Wasaaradahooda” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdiweli.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli ayaa sidoo kale xusay in golaha Wasiiradu ay isla soo qaadeen xaaladda amniga ee dalka, ayna gaareen go’aano lagu horumarinayo sugida amniga iyada oo laga ambaqaadayo baahida deg deg ah ee jirta.
Golaha wasiiradda cusub ayaa loo qeybiyey xeer hoosaadka ay ku shaqeynayaan, waxaana Raysul wasaare C/weli sheegay in xukuumadda cusub lafa rabo iney sameyso isbadel deg deg ah.
Raysul wasaare C/wali Sh Axmed ayaa sheegay in muddo 5 maalmood ah wasiiradii hore iyo kuwa cusub xilka kula kala wareegayaan si shaqadu toos ugu bilaabato.
Riix Prev ama Next dhanka midig ee qeybta ugu hooseysa sawirrada si aad u aragto sawirro kala duwan.